महिलाले किन ३० वर्ष भन्दापछी बच्चा जन्माउनु हुँदैन ? यस्तो छ कारण – List Khabar
Home / समाचार / महिलाले किन ३० वर्ष भन्दापछी बच्चा जन्माउनु हुँदैन ? यस्तो छ कारण
admin October 11, 2021 समाचार Leaveacomment 61 Views
पाको उमेरमा गर्भाधारण गर्दा महिलामा अन्य समस्याहरु पनि हुन्छन् । जस्तै उनीहरुमा डायविटिज, उच्च रक्त चापको समस्या हुन सक्छ । मुटु, रक्तचाप, सुगरका विरामीलाई गर्भधारण गर्न निकै कठिन हुन्छ । उनीहरुले जन्माएको शिशु पनि अस्वस्थ हुने खतरा त छँदैछ ९ महिनासम्म गर्भाधारणको समयमा पनि विभिन्न पीडा हुने गर्छ । वंशानुगत समस्याका कारण पहिलोे बच्चा अपांग भयो भने दोस्रो सन्तान पनि त्यस्तै हुने २५ प्रतिशत सम्भावना हुन्छ । र, पाको उमेरमा गर्भाधारण गर्दा त यो समस्या झनै बढी हुन्छ । तसर्थ पहिलो बच्चामा वशांनुगत समस्या छ भने दोस्रो सन्तान जन्माउँदा चिकित्सकसँग वंशानुगत परामर्श लिनुपर्छ
Previous काठमाडौमा मा सु भात खाएर मोटो भए भन्दै खुशी भइन् उनी (भिडियो हेर्नुस्)
Next ललितपुरमा भएको यो घट’नाले सबैको मन बनायो चिसो